के धर्म निरपेक्ष र इसाइकरण एकै हो ? | नेपाल दर्शन
के धर्म निरपेक्ष र इसाइकरण एकै हो ?
प्रभात अधिकारी २२ असोज २०७६
धर्मको अर्थ र मर्म नबुझेका बिधर्मी शाशकहरुले क्रिश्चियन चर्च र दातृ निकायहरुको प्रभावमा परेर २०६३ साल जेष्ठ १४ गते नेपाललाई धर्म निरपेक्ष घोषणा गरे । नेपालको सन्दर्भमा धर्म निरपेक्ष भन्नु हिन्दु बौद्धमाथी आक्रमण गर्नु र इसाइकरणलाई प्रोत्साहन गर्नु जस्तै भएको छ । विश्वका अधिकाशं राष्ट्रहरुले आ आफ्नो पहिचान बोकेर राष्ट्रवादी धार पक्रन थालेकाले दोस्रो विश्वयुद्धदेखि नेपालललाई पनि हिन्दुअधिराज्य घोषणा गरिएको थियो ।
हिन्दुत्व नेपालको राष्ट्रिय पहिचान हो । नेपालको मामलामा हिन्दु भन्नाले यहाँको प्रकृती पुजक मौलिक धर्म सहित बौद्ध धर्म समेत सबै ओमकार परिवारलाई समेटदछ । हिन्दु भित्र सबै अटाउछन । राई किरातले किरातेश्वर महादेव भन्नु, शिव पार्वतीलाई पारुहागं र सुम्निमा भनेर पुज्नु आफ्नै मौलिक विशेशता हो । तर पुजिने देवता एकै हुन । थारुको र मगरको माघी पर्व बाहुन क्षेत्रीले पनी मानेकै छन, दशै तिहार र छठ अनि होली ल्होसार सबैमा सबैले उपस्थिती जनाएकै छन । यहाँको मौलिकता र सांस्कृतीक महत्वलाई विचार गरेर नै संविधानमा स्पष्ट हुने गरेर नेपाललाई हिन्दु अधिराज्य घोषणा गरिएको थियो ।
नेपाल दक्षिण एसियाको भु रणनैतिक क्षेत्र भएकैले नेपालमा पश्चिमाहरु आफ्नो प्रभुत्व जमाउन चाहन्छन । नेपालप्रती चिनको आफ्नै स्वार्थ छ, भारतको आफ्नै स्वार्थ छ । तर चिन र भारतको स्वार्थभन्दा माथि र सबैभन्दा घातक स्वार्थ पश्चिमा राष्ट्रहरुको छ । उनिहरु नेपालमा अस्थिरता मच्चाएर आफ्नो राजनैतिक उपस्थिती जनाउन चाहन्छन । त्यसैका लागी उनिहरु यहाँको जनतालाई आफुअनुकुल प्रयोग गर्न चाहन्छन । यसको लागी गतिलो अस्त्र भनेको वाइवल नै हो । नेपालमा वाइवलको लागी बाटो खुकुलो बनाउने माध्यम भनेको धर्म निरपेक्ष नै हो । नेपाललाई धर्म निरपेक्ष घोषणा नेपाली जनताको स्वार्थ भन्दा पनि पश्चिमा राष्ट्रहरुको स्वार्थका लागी भएको हो । ४ प्रतिशत मुश्लिमहरुले कहिल्यै पनि धर्म निरपेक्षको माग गरेका थिएनन । बरु १ प्रतिशत क्रिश्चियनलाई खुशी पार्दै नेपालमा क्रिश्चियनको संख्या बढाउन धर्म निरपेक्ष भएको हो ।
क्रिश्चियनहरुकै तथ्यांकअनुशार नेपाल संसारमा सबैभन्दा धैरै मात्रामा धर्म परिवर्तन भई क्रिश्चियनहरुको संख्या बढेको राष्ट्र हो । यदी यो क्रम जारी रहने हो भने निकट भविश्यमा नै नेपालमा हिन्दु बौद्ध लगायत यहाँका मौलिक धर्म मान्नेहरु अल्पमतमा पर्ने छन । जुन दिन नेपालमा क्रिश्चियन हरुको संख्या ५० प्रतिशत पुग्नेछ, त्यो दिन नेपाललाई क्रिश्चियन राष्ट्र घोषणा गर्नेछन । क्रिश्चियन हरुको रणनिति नै यस्तै छ । नेपालका निमुखा र मुर्ख जनतालााई कतै चामलको बोराको भर कतै नगदको भरमा किनिदै छ । त्यस्तै कतै धर्मको गलत व्याख्या गरेर भड्काइदै छ । कुनै पनि हालतमा नेपालमा क्रिश्चियनहरुको स्रख्या बढाउनु परेको छ, हिन्दुलाई अल्पमतमा पार्नु परेको छ र पश्चिमाको स्वार्थ अनुकुलको कार्य गर्न मिल्ने रणनैतिक आधार शिविर बनाउनु परेको छ । नेपालीले यो कुरा नबुझे आफ्नै भुमीमा शरणार्थी बन्न धेरै बेर लाग्दैन ।
पश्चिमका राष्ट्रहरुमा ६४ मुलुक क्याथोलिक धर्म सापेक्ष राष्ट्र छन । ६ ओटा बाप्टिक अर्थोडक्स मुलुक छन । त्यस्तै १७ वटा एंलिकन गरी ८७ वटा मुलुकहरु इसाई सापेक्ष राष्ट्रहरु छन । अमेरिकाको राष्ट्रपतिले बाइबल हातमा राखेर शफत लिएबाट उक्त देशलाई पनि इसाइ सापेक्षनै भन्नु पर्छ । त्यस्तै ४८ वटा देशमा इस्लामिक शासन छ । र ८ ओटा राष्ट्रहरु बौद्ध धर्म सापेक्ष मुलुक छन । इजरायल संसारमा एक मात्र यहुदी राष्ट्र हो । साम्यवादी मुलुक चिन पनि धर्म निरपेक्ष राष्ट्र होइन ।
ब्रिटिशले छोडेको भारत संसारमा नेपाल पछी एक मात्र धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हो । नेपाल र भारत दुवै देश मानव सभ्यताको मुल हुन । हिन्दु बौद्ध दुवैको उदथगम भुमी भारत र नेपाल नै हुन । यो तथ्य बुझेर नै यी दुवै देशलाई आफ्नो सभ्यताको मियो बाट बञ्चित गराउने काम गरियो ।
प्रभात अधिकारी २८ मंसिर, २०७६ - शनिवार
धार्मिक सहिष्णुताको ठेक्का हिन्दुलाई मात्र किन ?
नेपाल दर्शन २७ मंसिर २०७६, शुक्रवार
राजा भर्तृहरीको प्रेम
प्रभात अधिकारी कार्तिक २०७६
सीमा विवादको विषय सडके राष्ट्रवादको मुद्धा होइन
नेपाल दर्शन २५ कार्तिक २०७६
एक बिधर्मी साईँको सत्यता